Ka Hor Kulanka Crystal Palace, Jurgen Klopp Oo Ay Haysato Dhibaato Wayni Oo Dhinaca Difaaca Ahi Iyada Oo Joel Matip, Ragnar Klavan Iyo Lucas Leiva Ay Dhamaantood Tababarka Reds Seegeen. - Laacib.net
Ka Hor Kulanka Crystal Palace, Jurgen Klopp Oo Ay Haysato Dhibaato Wayni Oo Dhinaca Difaaca Ahi Iyada Oo Joel Matip, Ragnar Klavan Iyo Lucas Leiva Ay Dhamaantood Tababarka Reds Seegeen.
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa qirtay in kooxdiisu ay dhibaato wayn dhexda kaga jirto ka hor kulanka Premier Leaque-ga ee ay Anfield ku soo dhawaynayaan kooxda Crystal Palace. Klopp ayaa xaqiijiyay in tababarkii kooxdiisa ay seegeen saddexda ciyaartoy oo difaaca dhexe uu ku soo bilaabi jiray ee Joel Matip, Ragnar Klavan iyo Lucas Leiva.
Liverpool ayaa isku diyaarinaysa in ay talaabo kale sare ugu qaado sidii ay xili ciyaareedka soo socda ugu soo bixi lahayd Champions Leaque-ga waxayna soo dhawaynaysaa kooxda heerka labaad ka dagaalamaysa ee Crystal Palace wuxuuna Klopp sheegay in ay ku qasban yihiin sidii ay xal ugu heli lahaayeen difaaca kooxdiisa.Adam Lallana ayaa si wayn uga shaqaynaya in uu soo laabto laakiin Klopp ayaa sheegay in uu todobaadka soo socda si buuxda tababraka ugu soo laaban doono.
Dhinaca kale Klopp ayaa si wayn u amaanay xidigii uu kooxdiisa xili ciyaareedkan ka go’doomiyay ee Mamadou Sakho kaas oo waqti layaableh ku qaadanaya Crystal Palace. Sidoo kale Klopp ayaa amaanay Christian Benteke oo Anfield ku fashilmay basle qaab ciyaareed fiican ku soo bandhigay Crystal Palace.
Klopp oo ka hadlaya Matip, Klavan iyo Lucas ayaa ydihi: ” Nasiib daro ma aha mid aad u fiican. Waxyaabo yar yar ayaa naga soo gaadhay kulankii ugu danbeeyay, wax badan nooma sahlayso.Dhibaato yar oo muruqa ah oo haysata Joel Matip, Lucas Leiva sidoo kale Ragnar Kalavan wali dhibaato ayuu qabaa. Waxaa waajib nagu ah in aanu xal raadino usbuuc dhamaadka, laakiin qasab iguma aha in aan sanadka danbe xal raadiyo”.
Klopp ayaa sheegay in da’yarka Joe Gomez uu difaaca dhexe ka ciyaari doono haddiiba uu waayo dhamaan ciyaartoyda dhibaatada qaba wuxuuna yidhi: ” Iyagu (Matip, Lucas iyo Klavan) waqti xaadirkan tababarka ma joogaan, sidaa daraadeed wax fiican ma aha. Joe Gomez ayaa isniintii u ciyaaray kooxda U23s, marka si fiican ayuu sameeyay, talaabo wayn ayuu sameeyay todobaadyadii ugu danbeeyay, waxaa suurtogal ah in aanu isku dayno”.
Klopp oo ka hadlaya Mamadou Sakho ayaa yidhi: ” Sakho waa difaac aad u fiican, gaar ahaan marka aad si buuxda u difaacanayso, isagu waa wiil aad u xoogan, kaas oo ku fiican taakalka, wuxuuna ku fiican yahay daboolida iyo wax kasta , in aad ciyaartoy noocan ah haysato waa mid xaqiiqdii fiican. Marka waxan oo dhan laga yimaado waa wiil fiican kaas caawiyay Palace, in aanu isagu ku luglayn war fiican uma aha Palace”.
Sidoo kale Klopp ayaa ka hadlay Christan Benteke wuxuuna yidhi: “Marka ay kubbadu hawada ku jirto Christain waa halis, sababtoo ah waa mid aan la rumaysan karin, marar badan ayaanu halkan ku dareenay. Haddii aanu iyaga u ogolaano in ay boqolkiiba 50% si fiican kubbadaha u karoosaan, waxa uu heli doonaa madaxyo halis ah, laakiin kaliya haddii aad diirada saarto Benteke waxaad helaysaa Zaha iyo Townsend oo isaga ku wareegsan”.